बिहे फापेन भन्नेलाई देखाउनै फिल्म साइन गर्दैछिन् वर्षा ? « Mazzako Online
बिहे फापेन भन्नेलाई देखाउनै फिल्म साइन गर्दैछिन् वर्षा ?
अभिनेत्री वर्षा राउतले गत फागुणमा अभिनेता संजोग कोइरालासँग बिहे गरेकी हुन् । बिहे गरेपछि उनले काम गरेका २ वटा सिनेमा रिलिज भए । जसमा, दाल भात तरकारी र जात्रै जात्रा छन् । दुबै सिनेमा हलमा हिट भए ।
यसपछि, करिब उनले ८ महिना सिनेमामा काम गरिनन् । राम्रो कथाको प्रतिक्षामा उनले नयाँ सिनेमामा काम नगरेकी हुन् । उनै, वर्षाले एकाएक दुई सिनेमा लगातार साइन गरिन् । उनले २ नम्बरी र के घर के डेरामा काम गर्ने पक्का भएको छ । दुबै सिनेमाको औपचारिक घोषणा पनि भैसकेको छ ।
आखिर, एकाएक दुई सिनेमा किन साइन गरिन् त वर्षाले ? वर्षाका अनुसार, सिनेमामा काम नगर्दा उनलाई किन काम नगरेको, सिनेमा नपाएको हो भन्ने जस्ता प्रश्न सोझिए । यतिमात्र होइन, वर्षालाई बिहे फापेन भनेर समेत समाचार आए ।
बिहे फापेन भन्नेहरुलाई देखाउन नै मैले २ वटा सिनेमा साइन गरेकी हुँ, वर्षाले के घर के डेराको पत्रकार सम्मेलनमा भनिन् । के वर्षाले भने जस्तै उनको यो आक्रोश थियो या उनले सिनेमा साइन गर्नुको कारण नै यही थियो त ?